Iindaba - Abathengisi bezenzululwazi baxoxa ngezibonelelo zophando lwegama elingundoqo le-FBA
I-Las Vegas, nge-9 kaJuni, ngo-2021 (i-Arhente yeeNdaba zeHlabathi) -Umthengisi wezenzululwazi eLas Vegas, eNevada kutshanje uxoxe ngamagama aphambili kunye nezibonelelo zophando lwegama eliphambili lokuzaliseka komthengisi weAmazon. Inkampani kutshanje ibhengeze ukumiliselwa kwegama labo eliphambili leAmazon FBA, eliyilelwe abantu abathengisa kwiAmazon.
Ummeli wenkampani, uRobert MacDonald, uthe: "Uphando lwamagama aphambili lubalulekile nakweyiphi na imboni, nokuba ithengisa iimveliso okanye inewebhusayithi eneenkcukacha. Ukwenza abantu batyelele le webhusayithi, kusetyenziswa amagama aphambili, kwaye ukuze wazi ukuba ngawaphi amagama aphambili afanelekileyo, kufuneka uphando. ”
UMacDonald uthe isixhobo senkampani siya kukhangela iAmazon ngexesha lokwenyani kwaye sihlala sibonelela ngamagama aphambili kunye afanelekileyo. Uthe isixhobo senkampani sinika olona lwazi luchanekileyo lwegama kwaye simahla kubathengisi be-FBA. Uye wongeza ukuba uphando lwamagama aphambili, ngakumbi kushishino olunokhuphiswano olunje ngokuthengisa kwiAmazon, kubalulekile ukuba abathengisi bahlale phambili kukhuphiswano.
UMacDonald uthe: "Ukonyuka okuncinci kwinqanaba lokuguqulwa komntu kunokuthetha umahluko omkhulu phakathi kokudweliswa njengenombolo kuGoogle kwelo gama liphambili okanye ukuphazanyiswa kukungxama." “Nantoni na kolu shishino. Wonke umntu kufuneka azi ukuba kufuneka abekwe kwinqanaba lokuqala lamaphepha. Ngapha koko, bakwizinga elingcono kwiphepha lokuqala, kwaye le yindlela amagama aphambili enza ngayo oku. ”
UMacDonald uthe nayiphi na inkampani engafumanekiyo kwiphepha lokuqala okanye ezimbini kwiinjini yokukhangela ayinakufunyanwa lukhangelo oluninzi. Izifundo zibonise ukuba uninzi lwabathengi lubrawuza kuphela amaphepha amabini okuqala ukuya kwamathathu kuGoogle xa bekhangela imveliso ethile okanye inkonzo, ke kubalulekile ukuba ubekwe kwindawo ephezulu kwigama elithile. IMacDonald yongeze ukuba isixhobo samagama esimahla samaAmazon sinokunceda iinkampani ukuba zifikelele kula manani anqwenelekayo.
"Nabani na oye wenza naluphi na uhlobo lokuthengisa kwi-Intanethi uyazi ukuba ukufikelela kumaphepha ambalwa okuqala kubalulekile," wongeze watsho. "Sivelise esi sixhobo kubathengisi beAmazon ukubanceda babeke inqanaba kwiimveliso abazithengisayo. Amagama aphambili afanelekileyo aya kudlala indima ebalulekileyo ekufikeleleni kwizikhundla eziphezulu ezinqwenelekayo nasekuncedeni aba bathengisi bafikelele kubaphulaphuli abafuna. ifuthe. ”
UMacDonald uthe nabani na onemibuzo okanye ofuna ulwazi oluthe kratya unokundwendwela inkampani kwi-Intanethi ukuze afunde ngokwaphuka kwesixhobo kunye nendlela esisebenza ngayo. Wongeze ukuba isixhobo sinika abathengisi utshintsho oluncinci, kodwa olu tshintsho lunokuvelisa iziphumo ezinkulu kwiAmazon.
Uthe esi sixhobo senzelwe ukubonisa kuphela amagama aphambili eAmazon, ke isebenza ngokugqibeleleyo nabathengisi beAmazon. Njengazo zonke izixhobo, isixhobo soMthengisi seNzululwazi asibonisi uluhlu olukhulu lwazo zonke izinto ezinokubakho ezinje ngezixhobo, kodwa zibonisa kuphela amagama aphambili kubathengi baseAmazon, ukuze abathengisi bakhethe ngokulula ngakumbi into abayifunayo ukusebenzisa amagama aphambili.
UMacDonald uthe, eyona nto ibalulekileyo, sisixhobo esibonelela abathengisi ngendlela yokukhulisa ishishini labo ngokwandisa ukuthengisa, kuba ayinguye wonke umntu oya kuba nenqanaba kuwo onke amagama aphambili. Ngenxa yoku, iMacDonald yatsho ukuba abathengisi kufuneka babe nesixhobo segama eliyintloko esenzelwe ukusebenza kumzi mveliso othile, kwaye basebenzise isixhobo ukukhetha amagama aphambili abenza ukuba bakhule kwishishini labo.
Abo banomdla banokufunda isibhengezo sangaphambili senkampani kwiziko leendaba leCandelo loNcedo okanye undwendwele iwebhusayithi yayo esemthethweni ukuze ufunde okungakumbi ngesixhobo salo esingundoqo sophando esilungiselelwe ngokukodwa abathengisi beAmazon. Inkampani inokunxibelelana nayo ngephepha labo elisemthethweni le-Facebook okanye ngokuthe ngqo kwifowuni okanye nge-imeyile. Abo banomdla banokufumana ulwazi loqhakamshelwano kunye nawo onke amajelo eendaba ezentlalo kwiwebhusayithi yabo esemthethweni.
Ngolwazi oluthe kratya malunga noMthengisi weSayensi, nceda unxibelelane nenkampani apha: Umthengisi weSayensi URobert MacDonaldsupport@scientificseller.comPO Box 29502 # 84699Las Vegas, NV 89126
I-Instagram "ayisosicelo sokwabelana ngesithombe", umntu ophetheyo u-Adam Mosseri uvumile ukuba i-Facebook Inc (NASDAQ: FB) isebenzisane neTikTok kunye neAlfabhethi Inc (NASDAQ: GOOG) kwividiyo emfutshane. (Nasdaq: GOOGL) Kwiklip yevidiyo emfutshane kwiYouTube, iMali yezeMali ivume ukunika ingxelo. Yintoni eyenzekileyo: UMosseri uvumile ukwanda kokubaluleka kwevidiyo ekuqhubeni amaqonga e-Intanethi kwaye wafuna ukuhoya ngakumbi amajelo eendaba. Abahlalutyi bavakalise inkxalabo malunga nokutshintsha kweyona injini ibalulekileyo yokukhulisa imali kuFacebook, enokuthi ibe semngciphekweni kwi-Instagram
Amagqabantshintshi athi "Ndicinga ukuba kufanelekile" kwaye "Andisoze" abuye azokulungiselela uKevin Smith's "Master of the Universe" kunye nommangaliso "Isilo esirhabaxa"
Inkampani yathi ngoLwesine ukuba i-Facebook Inc iqalile ukulumkisa abanye abasebenzisi ukuba banokubona "umxholo ogqithisileyo" kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni. Isikrini esikwabiwe ku-Twitter sibonisa isaziso sibuza ukuba "Ngaba ukhathazekile ngokuba umntu omaziyo esiba yingozi?" Omnye ulumkisa abasebenzisi ukuba "Usenokuba ubonakalisiwe kwimixholo eyingozi." Uthungelwano olukhulu lweendaba zosasazo emhlabeni Kudala luphantsi koxinzelelo kubenzi bomthetho kunye nemibutho yamalungelo oluntu yokulwa ubundlobongela kumaqonga ayo, kubandakanya nokuthatha inxaxheba kwiphulo lasekhaya laseMelika kwiziphithiphithi zaseCapitol ngoJanuwari 6, xa amaqela axhasa owayesakuba nguMongameli uDonald Trump azama ukuyeka Inkongolo yaseMelika ingqina ukuba uJoe Biden uphumelele unyulo jikelele lukaNovemba.
Ngokwengxelo entsha evela kwiGameBeat, "Star Wars: Squadron" umphuhlisi we-EA Motive uqala inqaku elithandwayo lokusinda kweentsomi zesayensi "Indawo efileyo".
Isitudiyo somdlalo esekwe eLos Angeles ubuninzi 6 sikhulise imali ngakumbi njengoko isanda kwaye ilungiselela ukumilisela umdlalo wayo wokuqala. Ukuqala uxelele iTechCrunch ukuba baphakamise i-30 yezigidi zeedola kumjikelo we-Series B okhokelwa yi-FunPlus Ventures, ngokuthatha inxaxheba ku-Andreessen Horowitz (a16z), LVP, Transcend, Anthos Capital, kunye noMitch Lasky. Isitudiyo ngoku sichaze malunga ne- $ 49 yezigidi kwinkxaso-mali, isixa semali esiqwalaselweyo, kodwa ibonisa ukuba bangaphi abatyali-mali abanethemba lokuhlangana kwimidlalo yeqonga emva kwe-IPO monster.
Iqonga lokwabelana ngemifanekiso liceba ukuthintela ukusetyenziswa kolwimi okanye imifanekiso elungiselela okanye ethoba isidima seentlobo ezithile zomzimba.
Inkwenkwezi yebhokisi ephezulu yeofisi yayifuna ukufumana i-franchise "yangoLwesihlanu" evela eWarner Bros. kwaye ityhola istudiyo ngokulibaziseka okugqithisileyo kunye nokuphathwa gwenxa. UWarner uthe ingxaki ibikumkhenkce.
Iikhosi zokongamela ishishini, izifundo ezi-7 ezikhethekileyo ezibandakanya ulawulo, ukuthengiswa kwedijithali kunye nemithombo yabasebenzi, njl. Ngokukhawuleza nangempumelelo kugqitywe kwiinyanga ezi-8, ukuvumela ukuba ufumane ifashoni yaseBritane.
IWarner Bros. Studio eLeavesden, e-UK (WBSL) yandise amaziko ayo ngokungenisa izandi ezithathu ezitsha kunye nenqanaba lemveliso ebonakalayo, V Inqanaba. I-HBO's "Game of Thrones" prequel "Dragon House" yaqinisekiswa njengemveliso yokuqala yokusebenzisa eli ziko litsha. ngaphandle kwe[...]
Umlawuli ucacisile indawo enempikiswano edlala inkwenkwezi yeqonga kumfanekiso wakhe we-2019 oMfanekiso oBalaseleyo otyunjiweyo "Kanye Kanye Ngexesha laseHollywood".
Emva kweenyanga zokuthintela ngamandla, ukusasaza ubuxoki, kunye nokuqokelela uthotho lweefilimu zokuthand 'izwe, umabonwakude kunye nomxholo womculo, iqela lamaKomanisi lase China lagqiba ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka eyi-100 ngoLwesine. Iqukethe iintetho zopolitiko, ukukhumbula ngobuninzi okulungiselelwe ngononophelo eTiananmen Square, kunye ne-chauvinism […]
I-HKMA iququzelela izifundo ze-8 ze-MBA kunye neeyunivesithi ezi-5 ezidumileyo kwaye isebenza ngaxeshanye eHong Kong, ibonelela ngezinto ezizodwa ezahlukeneyo, kubandakanya nolawulo lweshishini, ukuthengisa, ulawulo lwezemali kunye nabasebenzi. Iminyaka eyi-1.5 yokuyigqiba, ngokukhawuleza ubhalise kwizifundo zasimahla.
Umboniso bhanyabhanya omtsha kaChris Pratt ugxile kumadabi exesha elizayo nabachasi bamanye amazwe, kodwa eyona nto inomtsalane kuye yinto yabantu. Kwi "Imfazwe yangomso," uPratt udlala owayesakuba lijoni uDan Forester, ohamba aye ku-2051 asindise ikamva lentombi yakhe kwaye ajoyine umlo owoyisiweyo phakathi kwabantu nabahlaseli abanxanelwe igazi. “Ukuba uyakwazi ukubeka umdlalo weqonga 'obu bubomi obumnandi' ngokusebenzisa…
Inkosi yokuhanjiswa kwevidiyo iyithintele ngokungakhathali kwixesha elidlulileyo, kodwa ishishini likhula ngokukhawuleza.
Akukho kuphazamiseka, isiqinisekiso esipheleleyo! Sukubonelela ngesiqinisekiso sosuku lokuqala! Ipolisi yeinshurensi iqala ukusebenza kukhuseleko oluyi-1 [iGlobal Super Power].
Le ntshukumo ibonisa ukuba ukunqongophala kwe-chip kuya kuyichaphazela ngokubonakalayo imboni emva kwekota yesibini. Abanye abaphathi beshishini lezemoto bathe eli xesha liya kuphawula elona xesha libaluleke kakhulu kwiingxaki zonikezelo.
Amaphupha yindawo apho ungadlala khona kunye namava amaphupha eMedia Molecule kunye noluntu lwayo. Esi sisithuba sokwenza amaphupha akho, nokuba yimidlalo, ubugcisa, iimuvi, umculo okanye nantoni na ephakathi.
Ukuhlaziywa kwemvume kunye neshedyuli. Inkampani ithe iinethiwekhi ezimbini ze-EW Scripps ezintsha ezisungulwe namhlanje, iRealReal kunye neDefy TV, zichithwe kwi-92% yamakhaya aseMelika. Ukongeza kwinkcitho yenethiwekhi, iScripps ikwabhengeze iinkcukacha zenkqubo. Umabonakude wakwa-Defy uza kugxila kumadoda aneminyaka eyi-25 ukuya kuma-54 kwaye abonelele […]